Tilmaanta adeegsadaha 'Metrobus' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulHagaha isticmaalka Metrobus
13 / 11 / 2012 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, Metrobus, TURKEY
Maxaa nolosheena ku jira Metrobuswaxay bixisaa faa iidooyin muhiim ah xagga gaadiidka. Ma dafiri karno tan, laakiin waxaa lagu doodi karaa sida raaxada leh ee safarkayagu yahay maadaama waqtiga imaatinkeennu soo gaabiyo. Intaa waxaa dheer, ma fuuli karno mitirka magaalo marwalba oo aan rabno in aan kor u qaadno. Aynu aragno inta qof ee hortayada taagan, imisa daqiiqo ayay gaadiidku yimaadaan oo ugu muhiimsan, ma jiraa meel looga gudbo gudaha?
MetrobusRakaab badan, waa runtii tijaabo sabir. Basasku waxay ku guuldaraystaan ​​halka ay ka dhacdo, qaboojiyeyaasha mararka qaar waxay shaqeeyaan jiilaalka, mararka qaarna aan shaqeynin xagaaga, bir-goysyada ayaa loo adkeeyay si xoog ah, albaabo aan furin, mararka qaar ha xirin markii la furay, iyo in ka badan…
Waxaa jira cufnaanta cajiibka ah ee u dhexeeya 07: 00-08: 00 aroortii iyo 17: 00-19: 00 fiidkii, gaar ahaan inta lagu gudajiray saacadaha ganacsiga iyo saacadaha iskuulka. Markay sidaas tahay, waxaan inta badan baabi'inaa ikhtiyaarka yolculuk ee u safraya fadhiyada,, oo waxaan bilaabeynaa qiimeynta xulashada "Waxaan fursad u helayaa inaan galo ..
Markii aan ku nimaadno metrobus dhowr istaag oo kala duwan ugu yaraan dhowr bilood, waxaan si tartiib tartiib ah u arki karnaa dhinacyada wanaagsan iyo kuwa xun oo aan u dhaqmeynaa sida saxda ah. "Maya, muddo sanado ah ayaan jiray Metrobus Waxaan ka door bidaa ”saaxiibbadeen, kuwaasoo hadda gaadhay heer ay ku takhasusaan arrintan.
Hadafkayagu waa inaan awoodno inaanu marka hore saarno mitirka waaweyn ka dibna aan istaagno si aan u gaarno halka aan u dhaqaaqno. Tani waa shaqo adag, laakiin ma ahan wax aan macquul aheyn.
Joojinta ayaa muhiim ah
Metrobus joogsigu waxay muhiim u yihiin gaadhiga. Haddii aad doonayso inaad tagto meelaha ugu horreeya (Edirnekapı, Zincirlikuyu, Söğütlüçeşme), waxaad heli kartaa naftaada meel aad ku fariisato mid ka mid ah basaska madhan ee midba midka kale yimaado. Maaha inaad deg degto, laakiin ma aha inaad kabuubiso.
Haddaad u baahan tahay inaad joojiso joogsiga dhexe, shaqadaadu runti way adag tahay. Gaar ahaan waqtiga shaqada iyo saacadaha iskuulka. Tusaale ahaan, Incirli iyo Zeytinburnu. Haddii aad u safreyso jihada Söğütlüçeşme, waa inaad kula dagaallameysaa boqolaal dad ah joogsiyadaan. Haddii aad haysatid suurtagal, waxaad aadi kartaa joogsiga 1-2 adinka adigoo qaadaya metrobus dhinaca haadka ka soo horjeedda oo waxaad si fudud uga heli kartaa meel ku taal aagagga aan wali buuxin.
Tusaale ahaan, haddii aad qorsheynaysid inaad aado Mecidiyeköy adoo ka qaadanaya magaalada metrobus istaagga İncirli saacadaha hore ee subaxdii, waxaad marka hore ka tagi kartaa goobta istaagga Bahçelievler adiga oo qaadaya metrobus jihada ka soo horjeedda. Waxaad arki doontaa in mitrooga halkan imanaya aysan weli buuxsan.
Xusuusnow qaybta jirka. Looma baahna shucuur
Xitaa haddii aad hubto inaad ku fuusho bas madhan, ha iloobin rakaabka kugu hareeraysan. sida caadiga ah Metrobus dad badani waxay bilaabaan inay is hor taagaan albaabka hortiisa. Waqtigan xaadirka ah, waxay iskudayaan inay dhaqdhaqaaqa dhaqaaqaan iyagoo adeegsanaya jirka. Ma noqon kartid qof xiisa leh marka ay sidan oo kale u dhaqmaan. Ugu yaraan waa inaad si qumman u istaagtaa si aad u ilaaliso halka aad taagan tahay ilaa intaad ka soo galayso, "Oh, garbahaygu wuxuu kugu dhuftay ceeb, horay u soco," waa inaadan helin fikradaha noocaas ah. Caqli galnimadu waa carqalada ugu weyn ee ku habsatay tartamada booska.
Ma fadhiisan karnaa, mise waa inaan sii wadnaa istaagaan?
Hadafkeenii ugu horreeyay wuxuu ahaa inaan gaarno magaalada, waana ku guuleysanay, intaas kadib, haddii ay suurtagal tahay waan fadhiisan karnaa. Taas oo runtii ku dhici doonta qaybta adeegga raaxada hizmet ” Metrobus In xaaladaha. Sidii aannu nidhi, haddii aad sugeysid joogsiga meelaha basaska madhan sida Edirnekapi, Zincirlikuyu ay ka tagi doonaan, waxaad si fudud u heli kartaa meel aad ku fariisto kadib sugitaan yar. Isku soo wada duuboo, inta lagu gudajiro saacadaha shaqada, dadku waxay huraan baska 2-3 si ay ula kulmaan albaabka hore. Meesha ay taagan yihiin, halka albaabku ku yaallo, ayaa iyaga ku ilaalinaya, sida uu qabo isaga u qaad booskooda ugu dambeeya. Halkee ayuu albaabka dhexe noqon lahaa haddii hal cajiin ah Mercedes iyo laba Mercedes cagaar ah? Haddii laba mataanood yimaadaan oo hal cagaar yimaado, xaggee albaabka dambe? Dhammaantood waxay ku jiraan maskaxda dad badan oo haysta buugaag la awoodi karo. Xaqiiqdii, waxkasta oo ka socda dabaqa dhismeedka joogsiga ilaa meesha ay ku yaalaan biibiileyaashu waxay ku jiraan xusuustooda.
Kuwii bacda saaratay kursiga kahor intaadan fariisan waxey yiraahdeen 'Meeshan waa buuxa'
Badanaa waxaa adeegsada rakaabka dumarka ah. Waxa uu ku guuleystey in uu fadhiisto oo malaha isku dayo inuu boos ka helo saaxiibkiis, kaasoo uu hore u sheegay inuu wada fariisan doono. Wuxuu soo saaray shandad kursiga madhan ee dhiniciisa ku yaal wuxuuna yidhi, meeshan waa dolux buuxda. Way fiicantahay in la iska indho tiro. Sababtoo ah tani maahan shineemo, qof walbaa wuxuu raadiyaa safar raaxo sida ugu macquulsan uguna macquulsan waxaad fursad u heshay, ma ogid tirada dadka ka dambeeya ee aadan ka bixi karin dhalashada. Fadhiiso oo gasho dhagaha dhegaha. Khalad ma lihid! Hadduu isagu hore u yimid ...
Iska ilaali taabashada indhaha
Waqtigan xaadirka ah, uma baahnid inaad indho indheyn ku sameyso rakaabka kale markaad fadhido. Dabcan, waa inaanu fursad u siino dadka buka iyo dadka da'da ah, laakiin sidoo kale waxaa jira rakaab badan oo raadinaaya khiyaano oo kugu soo jiidanaya muuqaalkooda. Sidaa darteed, madaxa dhegahaaga dhegta u dhig, indhahaaga hortooda jeedi, oo fiiri jidkaaga.
Iska jir rakaabka aan xasilloonayn
Haddii bas madhan yimaado, tani waa wax la yaab ku ah rakaab badan. Qofna ma garanayo inay fududahay in la helo baska bilaashka ah. Marka laga reebo joogsiga ay basaska madhan ka baxaan. Sababtaas awgeed, rakaabkii arkay gaadhiga madhan ee wejiga ku jira, markii uu gudaha u galayo wuxuu eegi karaa muddo. Sida iska cad aad ayaan u xasilloonayn, waxaa jira kuraas badan oo faaruq ah, "Waxaan la yaabanahay midkee fadhiyaya? Dal wuxuu ku dhacay fikirka. Si kastaba ha noqotee, dhowr ilbiriqsi kahor intaanan u dhaqaaqin, "Waxaan la yaabanahay haddii aan geli karo?" Hadda wuxuu helay meel, "Waxaan la yaabanahay meeshaan fadhiyo?" Wuxuu bilaabay inuu doorto.
Oo wuxuu yidhi, kur Inta uu madaxiisa ka dhisayo, rakaab kale oo badan ayaa dhaqso u fadhiista meeshii uu ka helo. Haddii dadkaan aadan gaarin ay hortaada taagan yihiin, waxay kaa hor joogsan kartaa inaad fadhiisato maxaa yeelay waxay xaddideysaa dhaqdhaqaaqaaga kala duwan. Iyada oo lagu xushmeynayo dhammaan safarka, socotada waxay mudan yihiin garaacid nadiif ah. Xaq uma lahan in uu sii haysto dadkaas gadaashiisa, oo ay u badan tahay in uu bilaabo wadahadalada.
Iyagu way kugu soo degi doonaan markaad tallaabooyinkaagu soo socdaan
Waxaad fuushay bas dadku buuxsameen, ma jirto meel loo maro tallaabo. Hagaag, waxaad u baahan tahay inaad xoogaa neefsato, maya? Waa inaad u oggolaataa naftaada boos ilaa iyo 1-2. Ama intee in leeg ayaad ka heli kartaa adigoo garajinaya inta ugu badan ee aad karto? Rakaabka banaanka ah ee dhaha, Miyaad qaadi kartaa talaabo kale? Genellikle wuxuu had iyo jeer leeyahay fikradda, "Midkastoo aan galo ama wax alla wixii dhaca .. Sida gadaal gadaal Metrobus ma imaan doono, kii ugu dambeeyay ee uu doonayo inuu fuulo Metrobus? Markaad qaaddo tillaabooyin yaryar, dadka 2-3 waxay rabaan inay yimaadaan meelaha banaan, ee aan ahayn. Tani waxay u adeegi doontaa caqli galnimada safarka qasacadaysan, markaa waxaa laga yaabaa inaadan xitaa helin meel aad ku neefsato muddo ka dib.
Meelaha ugu raaxada badan dadka safarka taagan
Waxaa laga yaabaa in afka albaabka loo muujiyo inuu yahay meesha ugu raaxada badan, laakiin maahan. Xusuusnow in rakaab badan ay marwalba is ogyihiin inay istaagaan albaabka. Sidaa daraadeed, kuwa raba inay ka degaan baska, ama kuwa raba inay raacaan si raaxo leh uma dhaqaaqi karaan. Qaybta dhexe mararka qaar waa faaruq, laakiin dadku xitaa ma gali karaan sababtoo ah albaabku buuq badan yahay. Waxa ugu wanaagsan ee albaabka laga joogaa waa hawo nadiif ah oo la timaadda furitaanka albaab walba meel walba. Sidaad ogtahay, metroobooyinka badanaa waa mid dadku buuqsan yihiin (badanaa tixgalinta in qaboojiyuhu uusan shaqeynaynin), dadku waxay ubaahanyihiin xitaa dhowr ilbiriqsi oo hawo nadiif ah.
Guud ahaan marka laga hadlayo, waxaa jira meelo raaxo leh, oo ka soo horjeedda albaabbada dhexe ee dhammaan metroobyadu waa kuwo aad u deggan. Waxa jira kursi bidix bidix albaabka iyo kuraas bidix bidix. Si kastaba ha noqotee, qaybta dhexe waa madhan yihiin rakaabkuna si fudud ayey ugu safri karaan iyagoo ku tiirsan daaqadda. Meel kale oo raaxo leh waa jaranjarooyinka dambe ee dambe. Waxaan xitaa arki karnaa in mararka qaar ay jiraan dad fadhiya meel bannaan oo ku dhow.
Meelaha metroobyada-dilaacyada ah, waxaa ku yaal gacanta gacan-u-eg-dhexaadka dhexe iyo banooniyoosiyada giraangiraha. Sababtoo ah carrabbooyinkani waa kuwo fidsan oo ballaadhan, xitaa saddex qof ayaa dhinac dhinac iska fadhiisan kara.
Meelahan oo dhami way kugu filan yihiin inaad wax ku barato, ciyaaro ciyaaro ama ku isticmaasho internetka. Marba marka aad xiisaynayso waxaad dareemi doontaa in waqtigu si dhakhso ah u qulqulayo, joogsiyada ayaa midba mid u dhalaalaya. Haddii kale, sidaad u tirineyso joogsigaas, waxaad heleysaa dareen ah in wadooyinku weligood aysan dhamaan doonin.
Isu diyaari inaad horay uga sii dhaqaaqdid ama dhaqso u dhaqaaq ama sug ilaa ay taariikhdu ka baxdo
Sidoo kale way adagtahay in laga baxo metrobus oo laga baxo saldhiga maadaama ay tahay fuulida metrobus. Tani waa xaalad adag haddii aad ubaahantahay inaad udhaqaaqdo meel cidhiidhi ah oo buuq badan. Laakiin waxa ku adkaanta ayaa ah in lagu soo bandhigo ficilada dadka fikirka lihi. Ma doonayo inaan qaawan sigaarka la iiga muuqdo isla marka aan ka baxo taraka! 1 ilbidhiqsi ka dib markii aan degay, ma fahmin dadka iyagu gubta sigaarka oo qiiqa ku tuura meesha qof walba joogo. 1-2 Haddaad sugto daqiiqad kale oo aad bannaanka cabto, miyaad dhiman doontaa? Maxaad dadka ugu sumaysaa? Sababahan iyo kuwa kaloo badan awgood, haku degdegaan, ama sug meesha si aad u nadiifiso.
Dhaqdhaqaaqa amaanka ah ee kaxeynaya Bayramic
Liisanka wadista ayaa dhacaya
Hagaha Isgaarsiinta ee Rakaabka Imaatinka ah ee Diyaarsan
Tilmaamaha Socodka Yurub ee Tareenka Caamka ah
UTİKAD waxay daabacday hannaan wehelin oo miisaaman
Isticmaalka Hagaajinta Cusub ee Istanbul "IMM Istanbul"
Metrobus Fire | Metrobus oo lagu qabtay dabka (Video)
Qalabka Custo ee Ganacsiga ee CZ Loko wuxuu siin doonaa 20 qaybaha tareenada tareenka ee tareenada Belarusian
Qaybta dhexe ee tareenada ee Crossrail ee waddanka Ingiriiska ayaa saxiixaya heshiis wadajir ah Siemens - Invensys Railway si loogu rakibo nidaamka signalka